Internet Explorer na-echeghari iji ya rụọ ọrụ Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 4, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
IE7 nwere ụfọdụ ike dị ukwuu, mana edere m ihe kpatara m ji kwenye na ọ na-efunahụ ahịa na nkụda mmụọ maka onye ọrụ ọ bụla iji… kpọmkwem usoro menu nke gbasara aka ekpe na aka nri nke ngwa ahụ.
M dere banyere IE7 na ọ bụ egwu usability ntakịrị ihe karịrị otu ọnwa gara aga. Ọ na-egosi na IE otu echegharịrị atụmatụ ha ya na mmezi mmezi nke IE7. A ga-egosipụta ndabara menu na ndabara.
Tupu i chee na m na-akụ onwe m azụ, ị kwesịrị ịmata na m am Obi dị m ụtọ na ntụgharị rutere na ókèala kwesịrị ekwesị wee nwalee usoro ọrụ ọhụụ. Nsogbu m bụ na ejighi m n'aka na ha nwalechara usoro ahụ tupu ịhapụ ya.
Echere m na ọ ga-abụ atụmatụ dị egwu maka otu ahụ ịmebata eriri rịbọn na arụmọrụ 'Office Button' nke ahụ bụ, IMHO, nzọụkwụ dị egwu na-aga n'ihu n'iji arụ ọrụ na Office 2007. Ọ bụghị naanị na ọ ga-eme ka ojiji nke ihe nchọgharị ahụ ka mma, ọ ga-adị iche na asọmpi ahụ, webata ndị mmadụ na rịbọn interface - ikekwe nweta ụfọdụ nnabata, ọ ga-eweta ngwaahịa Microsoft ndị ọzọ na ndị ezinụlọ ndị ọzọ.
N'ezie, m ka kwere na ihe nchọgharị ga-azọ mpi ahụ ga-abụ nchọgharị na-ewebata ihe kachasị 'si na igbe' njirimara ọrụ onye ọrụ. Enweghị ihe ọ bụla achọrọ maka nbudata, ọ bụrụ na m nwere ike ịme ihe na datagrid, nchịkọta akụkọ HTML, akụrụngwa kalịnda, nhazi ihe oyiyi… na omenala xhtml na mkpado na ụdị, M ga-emepe ngwa maka ihe nchọgharị ahụ ọ bụla ọzọ!
Tags: Facebook MarketingGoogle+ maka DummiesHollis ThomasesJesse NọrọMwepụtaSocial Media Examiner
Pịa na-ebupụta Ngwaọrụ Google